Mfutshane.io: Ilebheli emhlophe yelebheli emfutshane | Martech Zone
Mfutshane.io: Ilebheli emhlophe yelebheli emfutshane
NgoLwesine, Meyi 7, 2020 NgoLwesithathu, Meyi 6, 2020 Douglas Karr
Kangangexesha elithile, bendityikityiwe kunye nenkonzo yokunciphisa ii-URL zam, kodwa iindleko zenkqubo zazibiza kakhulu. Ndisebenzisa eyam isezantsi indleko ngakumbi kwimodeli yamaxabiso. Ngapha koko, bendibhatala ngakumbi i-akhawunti yabo yokunciphisa i-URL kunokuba ndihlawulisiwe kumaqonga onke entengiso.
Ngendisebenzise inguqulelo yasimahla apho indawo yam yayingenziwa ngokwezifiso, kodwa II ndifuna abantu bayithembe kwaye bayamkele i-URL endandiyisasaza… kule meko hamba.martech.zone. Ukubeka enye i-URL yohlobo oluthile yiflegi ebomvu kubantu abaninzi abazi-ukhuseleko.
Kuthathe kuphela imizuzu embalwa ukufumana uninzi lwezixhobo kwi-Intanethi, kunye Mfutshane.io wema ngokukhawuleza. Ndingamhlophe ileyibheli emfutshane ngesizinda sam-nangaphantsi kweakhawunti yabo yasimahla! Ayisiyiyo loo nto kuphela, banendlela yokufuduka kunqumliso lakudala ukuba awukwazi ukuthumela ngaphandle nokungenisa idatha yakho… nangaphandle kwendleko.
NgeShort.io, ungayifumana imveliso ye-slug okanye ungayisebenzisa inombolo kunye nokunyusa ngokuzenzekelayo. Kwaye, ungangena kwaye wenze ngokwezifiso i-slug ngendlela onqwenela ngayo ukuba ungathanda, nawe.
Inqaku eliphambili kunye nokulandela umkhankaso weGoogle Analytics. Indlela elungileyo yokusebenzisa isifinyezo se-URL kukunciphisa ubude be-URL ende apho ufake nomtya wombuzo we-UTM. NgeShort.io, yonke le yinxalenye yokhetho kwi-URL yakho emfutshane enonxibelelwano olucocekileyo.
Okokugqibela, Mfutshane.io ikwabonelela nge- Plugin WordPress ukwenza mfutshane amakhonkco akho ngokuzenzekelayo usebenzisa i-API yawo. Eyona nto intle!
tags: kancinciidomeyini yesikoi-google analyticsUhlalutyo lwephulo lokujonga umkhondo kwi-urlUhlalutyo lukaGoogle lokulandelela i-urlmfutshane.cmmfutshane.iomfutshanemfutshane we-urlutmileyibheli emhlophe